MainWP: Jikwaa Jikwaa WordPress saịtị gị | Martech Zone
MainWP: Jikwaa Jikwaa WordPress saịtị gị
Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Tuesday, February 9, 2016 Douglas Karr
Ndị ukwu nọ na Automattic na-arụkọ ọrụ ọnụ centralized WordPress njikwa site na ha Jetpack ngwa mgbakwunye. Enweela m otu okwu na ya, n'agbanyeghị, na-efunahụ m ihe niile gara aga Jetpack nchịkọta mgbe m na saịtị ụfọdụ n'ụzọ na-ná njikọ na a staging saịtị na-ejikọrọ kama. Ọ bụ ihe bummer - na enwere m ekele na enwekwara m Google Analytics.
Ọ bụrụ n'ịchọghị ka ngwa ọrụ gị niile dabere na otu ikpo okwu dị ka Jetpack, enwere uzo ozo. N'oge na-adịbeghị anya, otu ndị ọrụ WordPress dị elu tụlere MainWP. Nakwa, MainWP na-ewe ụzọ dị iche iche esi ejikwa ọtụtụ saịtị - dị ka enyere gị aka ịgafe bipụta ọdịnaya ma tinye ndị ọrụ gafee saịtị.
MainWP nwere ihe ntinye 100,000 ma na-aga n'ihu na-enwe usoro siri ike nke isi ihe eji arụ ọrụ:
Nchịkwa Dị Mfe - MainWP Dashboard na-ewepu nsogbu na ijikwa gburugburu na plugins gị. Nwere ike inyocha nyocha nke saịtị WordPress gị nwere mmelite dịnụ site n'otu ebe etiti. Naanị otu pịa ga-emelite ihe niile maka gị.
Agbahapụ Plugins - MainWP na-enyocha ọnọdụ emelitere ikpeazụ nke plugins na isiokwu ma gwa gị ma ọ bụrụ na emelitebeghị ha n'oge ụfọdụ. Nke a na-enye gị nghọta ma ọ bụrụ na ngwa mgbakwunye ma ọ bụ isiokwu nwere ike ịhapụ onye edemede ka ị nwee ike ịchọ mgbakwunye ngwa mgbakwunye.
Otu Pịa Access - Iji MainWP Dashboard ị nwere ike ichefu iji dee URL ọ bụla, nbanye na okwuntughe iji nweta saịtị WP-Admin nwa gị. Anyị emeela ka ịnweta ebe nrụọrụ weebụ gị niile bụ ikuku site na iji ngwa ngwa ịpị anyị. Nyagharịa gị na sub-menu na pịa Admin njikọ imeghe, na ị na-ozugbo ite wee na njikere jikwaa. Enweghi ike ịbanye na okwuntughe!
Otu Pịa Upgrades - Site na MainWP Dashboard ị nwere ike imelite saịtị gị niile site na ịpị bọtịnụ, enweghịzi ihe kpatara ị ga-eji banye na saịtị gị ọ bụla na-enyocha mmelite dịnụ. I nwekwara ike gbanye isiokwu ma ọ bụ nkwalite mgbakwunye (ma ọ bụ leghara ha anya).
Pụrụ ịdabere na Backups - Jiri MainWP Dashboard nkwado ndabere ma nwee ọ backupụ maka ụdị nkwado ndabere maka saịtị WordPress gị niile. I nwedịrị ike ịhọrọ iwepu folda akọwapụtara nke na-adịghị oke mkpa. I nwekwara ike machiini ndabere gị ma nwee ntọala dị iche iche maka saịtị dị iche iche dabere na mkpa gị.
content Management - ibipụta ọdịnaya gaa na saịtị dị mfe ugbu a ọ nwere ike ịdị. Họrọ saịtị gị na ndepụta, dee ọdịnaya, ma bipụta ya, na-enweghị nsogbu ịbanye na saịtị ọ bụla. Ọ dị nfe ijikwa njikọ, nkọwa, na spam na-ejikwa ọrụ anyị bipụtara, hichapụ na spam.
Nchịkwa onye ọrụ - Ijikwa ọrụ na nwa gị na saịtị dị ugbu a dị mfe dị ka ọ pụrụ ịbụ. Can nwere ike ijikwa ndị ọrụ gị niile na saịtị gị niile site na MainWP Dashboard na-enweghị mkpa ịbanye na saịtị WordPress gị ọ bụla.
Ndi onwe gi - Ihe isi MainWP Dashboard bu ngwa mgbakwunye nke akwadoro na WordPress gi tinye ma obughi na sava nke anyi. Anyị anaghị edebe ihe ndekọ nke omume gị, saịtị Saịtị ma ọ bụ otu ị si eji ngwa mgbakwunye.
Debanye aha na otu ma ị nwere ike ịnweta Njikọ site na MainWP, karịrị 36 adịchaghị ndọtị na-agbakwunye ike siri ike nke ị na-agaghị ahụ ebe ọ bụla. Broken njikọ nyocha, nyocha ọsọ peeji, nchịkọta mwekota, nhazi oge, nhazi ntọala buru ibu, nlekota oge, yana kwa mbughari Blogvault.
Banye maka MainWP n'efu!
Tags: akpaghị aka wordpress backupscentralized wordpress njikwaisiwordpress akpaghị aka upgradeswordpress backupsnjikwa WordPresswordpress ngwa mgbakwunye upgradeswordpress isiokwu upgradeswordPress upgrades
5 Anzọ Animated Kọwaa Videos Dịkwuo Inbound Marketing Irè
3 Ntinye si oge ezumike 2015 iji nyere gị aka na 2016
Feb 9, 2016 na 4:23 PM
Nke a bụ nnukwu echiche. Kedu otu o si arụ ọrụ maka gị, Doug?
Feb 10, 2016 n’elekere 10:51 nke abali
Anyị na-arị elu netwọkụ ebe anyị ga-etinye ya iji Whitney. Ruo ugbu a, anyị ejirila Bochum Bochum jisiri ike gbochie ụfọdụ ọrụ ndị a. Akpọrọ m asị ịbụ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka njikwa na saịtị - ọ ga - akara m mma ịkwụ ụgwọ maka onye ọbịa na - elekọta ya.